Depiote Masy Goulamaly : « Nanampy betsaka ny distrikan’i Tsihombe ny Fitondrana » -
AccueilRaharaham-pirenenaDepiote Masy Goulamaly : « Nanampy betsaka ny distrikan’i Tsihombe ny Fitondrana »
Tsy nisalasala mihitsy ny depiote Masy Goulamaly nitondra fanazavana mikasika ny fanohanana sy fanampiana ny distrikan’i Tsihombe, Faritra Androy. “Misaotra ny Fitondram-panjakana ny tenanay solombavambahoaka lany tao amin’ny distrikan’i Tsihombe, satria mbola tsy nisy Fitondram-panjakana teto amin’ny firenena nanatanteraka fandraisana mpampianatra Fram ho mpiasam-panjakana faobe. Tsy vitan’izay fa tsy nataon’ny Fitondrana indray mielatra fotsiny ihany izany fa nataony isan-taona mihitsy manerana an’i Madagasikara. Ny faniriana dia ny hitohizan’izany fandraisana mpiasam-panjakana ireo mpampianatra Fram, ka tsy hisy intsony izany mpanabe sy mpampianatra tsy mpiasam-panjakana izany eto amin’ny firenena”, hoy ny depiote Masy Goulamaly.
Ankoatra izay, nanambara hatrany ity solombavambahoakan’i Tsihombe ity fa tsy mikely soroka ho amin’ny fampandrosoana ny firenena ny Fitondram-panjakana, tarihin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. Noho izay indrindra, nilaza ny depiote Masy Goulamaly fa hita taratra ny asan’ny Fitondram-panjakana amin’ny fampandrosoana ny Faritra Androy, misy ny distrikan’i Tsihombe. “Hita taratra fa misy fivoarana, ary miha mandroso ny distrikan’i Tsihombe. Sahiko ny milaza, hatreto, fa nahazo tombony ny distrikan’i Tsihombe. Tsy mijery, ary tsy miteny faritra hafa aho raha milaza izany…”, hoy hatrany ity solombavambahoaka ity.
Etsy andaniny, voalaza fa manatanteraka ny fanambiny tamin’ireo vahoaka nifidy azy ny Filoham-pirenena. Azo lazaina, hoy izy, fa tsy nataon’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ambanin-javatra ny fanabeazana tamin’ny fampidirana mpiasam-panjakana ireo mpampianatra Fram satria ny avy amin’ny Faritra Androy, izay miisa 120 izy ireo tamin’ity andiany fahefatra amin’ny fampidirana ho mpiasam-panjakana ireo mpampianatra ity.
Nanambara hatrany ny dipote Masy Goulamaly fa tamin’ity Fitondrana ity vao mba nahazo Ivon-toeran’ny Bakalôrea, Trano fandraisan’ny Beantitra fisotroan-dronono, Hopitaly manara-penitra misy efi-trano fandidiana sy Tranoben’ny fananan-tany… ny tamin’iny distrikan’i Tsihombe, Faritra Androy, iny.